corruption Archives - Zimbabwe Online News
THE unrelenting revelations by the media of executives of parastatals and state enterprises earning outrageous salaries and perks has attracted mixed reactions.The post Corruption: Dealing with top officials elephant in the room appeared first on The ...
ZRP’s decision to transfer 33 traffic police officers from its Avondale Police Station to remote stations for alleged corruption is a welcome development.
The post ZRP ‘treating corruption with kid gloves’ appeared first on The Zimbabwe Independent.
PRESIDENT Robert Mugabe is in a catch 22 situation after he made public allegations accusing former ZMDC chairperson Godwills Masimirembwa of soliciting a bribe.The post Corruption: Mugabe in catch 22 appeared first on The Zimbabwe Independent.
LAST week, while officially opening the first session of the eighth parliament of Zimbabwe, President Robert Mugabe declared “zero tolerance” to corruption.
The post Corruption: Now time to walk the talk appeared first on The Zimbabwe Independent.
May 6, 2013 Web Desk News No Comment